Maitiro Anogona Kuwedzera Yako B2B Kutengesa | ECommerce nhau
Maitiro anogona kuwedzera yako B2B kutengesa
Izvi maitiro ekudhinda inogona kuwedzera zvakanyanya kutengesa kwako pane yako bhizinesi repamhepo chikuva, zvirinani ivo vanogona kuiwedzera neinenge makumi maviri neshanu muzana, zvichibva pamhedzisiro Altman Vilandrie mapurisa izvo zvakaratidzwa vhiki ino. Asi chete zvikamu gumi neshanu muzana zvemakambani zvinoshandisa zvizere marongero aya
Kunyangwe makambani anoshandisa nzira idzi anogona kutadza kuwedzera kutengesa kwavo nekuda kwekushaikwa kwekubatana pamwe nekubatanidzwa mukati mekambani.
Maitiro acho anotevera
Nyora rwendo rwevatengi
Un 70 muzana yemapuratifomu eB2B izvo zvine hukama nemusika, nyora rwendo rwevatengi vavo, asi isingasviki gumi muzana muzana yavo inodzikamisa nzira idzi kazhinji. Kakawanda kuongorora kunogona kuwedzera kutengesa ne15 kusvika ku3 muzana.
Makambani anofanirwa kuongorora iyo vatengi vako 'rwendo rwekutenga Izvi zvinowanzo fanirwa kuongororwa mukati mevhiki kana kuongorora kwemwedzi papuratifomu. Kugadzirisa nzendo dzemumwe mutengi ndiyo chete nzira yavanogona kuseka yekutengesa kutenderera.
Ita kuti kutengesa uye kushambadzira zvishande pamwechete
Coordinate kutengesa uye kushambadzira Mushure mekutengesa kwekutanga unogona kuwedzera chikamu chekutengesa ne6 kusvika pa7 muzana, asi chete makumi mashanu neshanu muzana emakambani eB55B anoita izvi.
Kutanga iwe unofanirwa kunzwisisa akakosha mapoinzi maererano ne rekutengesa uye rekushambadzira sanganoIpapo iwe unofanirwa kushandisa mhinduro inogona kugadzirisa matambudziko akanangana nekambani.
Izvi zvinogona kusanganisira tsananguro yemabasa uye mabasa mukambani, kuenzanisa zvinokurudzira, kuratidza matanho ebudiriro, uye kuisa mari muzvishandiso zvakanaka kuti uite zvese izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro anogona kuwedzera yako B2B kutengesa
Petya Rudzikunuro rwunopinza bhizinesi repasirese mumhirizhonga
SugarCRM inotangisa Hint, iyo yekutanga njere muhukama